Notapenam-Bava Ny Gazeti-boky Antseraseran’i Yoani Sánchez Ao Kioba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2014 22:31 GMT
Gazeti-boky antserasera 14 y medio, araka ny hita avy any ivelan'i Kiobà.
Nampahafantarina androany tao anatin'ny adihevitra ny gazeti-boky antserasera tantanin'ilay bilaogera Kiobana Yoani Sánchez, 14ymedio [es] (14 taona sy tapany). Raha nikaroka ny rohy URL www.14ymedio.com ireo mponina ao amin'ny nosy, habaka milaza hoe “Yoani$landia.com» no hitan'izy ireo, izay ahitana ny iray amin'ireo foto-kevitra ampiasaina hanoherana an'i Sanchez lazaina fa nampiasa ny bilaoginy izy itsikeràny mafy ny fitondrana Castro hahazoany namana (mifanolo-tanana aminy) sy vola.
Ora fohy taorian'ny fampahafantarana androany, namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ny Andronay Voalohany (Our First Day), mitantara mivantana ireo ora maromaro voalohany nitsanganan'ny habaka ny 14ymedio, sy ny fanohanana azon'izy ireo sy ny fanapenam-bava nihatra tamin'izy ireo.
Tsy mila fandinihana betsaka ny famantarana ny momba an'ireo mpanafika, saingy noho ny tsy fananantsika porofo, ny hany azo lazaintsika dia olona manana fitaovana teknolojika, fahazoan-dalana hiditra sy mahazo vaovao mialoha, ary fanafenana anarana izy ireo.
Hoy ny “Fanambaram-Pikasana'” [es] navoakan'ny 14ymedio:
14ymedio no vokatry ny fivoaran'ny zava-tsarotra niainan'olona tsirairay voajary ho tetikasa iombonana. Nanampy nanetsika ny tontolon'ny bilaogy tao amin'ny nosy ny bilaogy Génération Y, tantanin'i Yoani Sánchez, ary nanjary famantarana eo amin'ny raharaha Kiobàna. Fito taona taorian'ny nanangana azy, izay namoahana lahatsoratra teo amin'ny an'arivony sy fanehoan-kevitra maherin'ny iray tapitrisa, nanjary nankany amin'ny sehatra midadasika amin'ny asa fanoratan-gazety ity bilaogy manokana ity ankehitriny.